तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनले १५ औं स्मृति दिवसका अवसरमा ३ जना स्रष्टालाई सम्मान गरेको छ ।
शुक्रवार महाराजगञ्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्मान प्रदान गरेका हुन् ।
स्व. रिमालको सम्मान उनकी छोरी रेखा ढकालले र स्व. परियारको सम्मान उनकी नातिनी मरिया परियारले ग्रहण गरेकी थिइन् ।
उनीहरुलाई मेयर शाक्य, राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर, फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपक के. सी., नातिकाजी स्मृति समाजका अध्यक्ष शम्भुजीत बास्कोटाले संयुक्त रुपमा सम्मान गरेका थिए ।
फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष वरिष्ठ अभिनेत्री भुवन चन्द थापा पनि त्यस क्रममा सहभागी थिइन् ।
सम्मानितहरुलाई जनही २५ हजार १ रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो भने दोसल्ला ओडाएर ताम्र पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले तारादेवी फाउन्डेसनमा २० लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिदिएको छ ।
नारायण गोपालको अधुरो चाहना पूरा गराउन करीब ६ करोड रुपैयाँ लगानीमा ‘‘गीत गंगा अडिटोरियम’’ निर्माण गर्दैछ ।